Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Rodrigo Moreno Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Na-adịghị Eke Ndụ
Akụkọ ndụ anyị nke Rodrigo Moreno na-agwa gị eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, mbido ya, ndị nne na nna, ezinaụlọ, nwunye, nwatakịrị, ibi ndụ, uru dị na ndụ onwe onye.
Na nkenke, anyị na-ewetara akụkọ ihe mere eme nke Football Genius na aha otutu “Rodri“. Ihe ncheta anyị na-amalite site n'oge ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama na bọl.
Iji mee ka ị detụ ụtọ ọdịdị nke Rodrigo Moreno's Bio, nke a bụ nchịkọta ihe osise nke ndụ ya.
Ndụ Mbido na nbili nke Rodrigo Moreno.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ dị ngwa ngwa, gbasie ike, nwee obi ike na nke kachasị mkpa, nwere anya maka ịme ihe mgbaru ọsọ.
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle mbipụta anyị nke Rodrigo Moreno's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Rodrigo Moreno nke Childhoodmụaka - Nzụlite Ezinụlọ na Ndụ Mbido:
A mụrụ Rodrigo Moreno Machado na 6th nke March 1991 na nne ya, Andréia Moreno Machado na nna, Adalberto Machado n'obodo Rio de Janeiro, Brazil.
Amuru ya dika nwa mbu na nwa nwoke nke nne na nna ya mara nma, nna dika nna ya na nwanyi mara nma nke anyi chere na obu mama ya.
Zute otu n'ime ndị nne na nna Rodrigo- Nna ya, Adalberto Machado na ikekwe nne ya.
Ị maara?… N'agbanyeghị na amaara ya igwu maka Spain, Rodrigo bụ n'ezie, onye agbụrụ dị ọcha nke Brazil na ezinụlọ ya sitere na mba South America.
N'ezie, onye ọ bụla n'ime ndị ezinụlọ ya sitere na agbụrụ agbụrụ Brazil. Agba akpụkpọ ha na-egosi akara Africa (Afro-Brazil) ezinụlọ malitere.
Rodrigo Moreno nọrọ afọ ndị mbụ nke ndụ ya n'obodo Brazil nke dị na Rio de Janeiro. Ya na nwanne ya nwanyị mara mma aha ya bụ Mariana Moreno tolitere.
N'okpuru bụ foto nke obere Mariana, nwanne ya nwoke bụ Rodrigo, nke a na-ese n'akụkụ nna ha mgbe ha nọ na ezinụlọ ha na Brazil.
Foto a na - adịghị ahụkebe nke Rodri, nna ya na nwanne nwanyị Mariana n'oge ọ bụ nwata.
Otu egwuregwu Njikọ Spanish si bido Rodrigo: Nna Rodrigo Moreno, Adalberto Machado (onye na-agba ụkwụ ochie) bụ maka ịhụnanya maka egwuregwu ahụ n'ezinụlọ ya.
Onye bụbu onye bọọlụ Brazil nke gbara na 80s. Papa ya bụ nwanne Iomar do Nascimento, aKA Mazinho (onye ọkpụkpọ ụkwụ ọzọ bụ onye so na ndị meriri iko ụwa 1994).
Ị maara?… Mazinho bụ nna nke Thiago Alcantara na Rafinha nke putara na ha bu umu nne.
Footballlọ akwụkwọ egwuregwu Spanish: Ná mmalite afọ 1994, a họpụtara nna Rodrigo Adalberto Onye na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ site na nwanne 1994 FIFA World Cup na-emeri nwanne Mazinho onye nwetara ụlọ akwụkwọ bọl na Vigo, Spain.
Iji nweta ihe doro anya, Vigo bụ obodo na ime obodo n'akụkụ Osimiri Atlantik ma dịrị n'akụkụ ugwu ọdịda anyanwụ Spain.
N'inwe mkpa ijikwa nnukwu ụlọ ọrụ football na Spain hụrụ ndị nne na nna Rodrigo Moreno ka ha na-akwaga ezinụlọ ha dum na Spain dị ka nwatakịrị.
Akụkọ Rodrigo Moreno na - eto eto - Mmụta na Ọrụ Buildup:
Mgbe ọ nọ na Brazil, tupu ezinụlọ ya dum akwaga Spain, Rodrigo na ụmụ nwanne nne ya bụ ụmụ akwụkwọ niile nke ụlọ akwụkwọ Barrel dị na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.
Maka Rodrigo, ịgbaso nzọụkwụ nna ya dị mkpa ka ọ malitere iso na-agba bọl tupu ọkwa 5th ya.
Iji nweta ezigbo agụmakwụkwọ futsal, nne na nna Rodrigo nyere ya ka ọ debanye aha na ụlọ akwụkwọ bọọlụ Escolinha do Flamengo n'isi mmalite mgbe ọ dị afọ 5.
Rodrigo bụ kpakpando nke Escolinha do Flamengo Juniors Team (otu ndi nna ya si ezumike nka oru). Ọ gbara ọtụtụ asọmpi ebe ahụ ebe ndị mmadụ kwụpụrụ ya, wee merie ọtụtụ Asọmpi Futsal ka nwa.
Rodrigo Moreno na mmeri mbụ ya na nsọpụrụ dị ka ụmụ amaala ụmụaka. Ọ bụ otu n'ime ụmụaka kachasị mma na agụmakwụkwọ.
Maka Rodrigo, ebumnuche ịgba bọl bụ ịhọrọ ebe nna ya hapụrụ, ya bụ, ịga n'ihu na-enwe nrọ ezinụlọ ya.
O doro anya, o siiri nna ya ike Adalberto Machado na nwanne nna Mazinho ime ihe banyere ezumike nka.
Mgbe ụmụ nwanne ya nke abụọ, Rafinha na Thiago Alcantara hapụrụ Brazil gaa Spain dịka obere ụmụaka, Rodrigo n'onwe ya kwagara Spain na ntorobịa ya, na-ebikwa na mpaghara Galicia.
Thiago na Rafinha bu ụzọ tinye aka na ulo akwukwo ulo akwukwo football nke nna ha n'afọ 1996 ma nna nna Rodrigo lere ya anya. Boysmụ nwoke abụọ ahụ na-ehi ụra mgbe ụfọdụ n'ụlọ Rodrigo mgbe Mazinho na nwunye ya na-eme njem maka azụmahịa.
Rodrigo hapụrụ Brazil mgbe ọ gbasịrị usoro futsal maka Flamengo ma sonyere ezinụlọ ya na Spain n'afọ 2003.
N'afọ nke abụọ mgbe ọ bịarutere (na 2005), ụmụ nwanne nna ya Rafinha na Thiago Alcantara agaa n'ihu na La Masia nke Barcelona.
N'okpuru ebe a bụ foto nke Rodrigo n'oge ọ bịara ileta ụmụ nwanne nne ya nke abụọ na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ FC Barcelona a ma ama.
Foto nke Rafinha n'oge nleta na ụmụ nwanne nne ya-Thiago na Rodrigo n'afọ 2005, n'oge ha dị ka FC Barcelona La Masia Newbies.
Rodrigo Moreno Biography - Ndụ Ndụ Mmalite:
Ahụmahụ Futsal na Brazil nyeere ya aka. Ọ bụ ezie na ụmụ nwanne nne ya nọgidere na ụlọ akwụkwọ FC Barcelona, ​​Rodrigo nke dị n'okpuru ebe a gara n'ihu na-egwu Ureca ebe ọ nwere echiche magburu onwe ya na ọrụ nwata ya.
Omume ya na ụlọ ọrụ ahụ nyere ya ohere itinye akwụkwọ maka Celta Vigo, nnukwu ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Spanish nke mere akụkọ ifo Jago Aspas.
Site n'enyemaka nke Futsal, Rodrigo nwere mmalite mmalite nke ọrụ ntorobịa ya na Spain.
N'ime afọ 2005, ọganihu Rodrigo hụrụ ya ka ọ na-agabiga ọnwụnwa ma sonyere ndị ntorobịa Celta Vigo.
N'ime ọnwa ole na ole mgbe ọ bịarutere na klọb ọhụrụ ya, talent ya malitere ịtụgharị isi na mmasị site na nnukwu klọb bịara ọzọ.
Mgbe afọ anọ na ndị Galician, onyinye na-enweghị atụ sitere na Real Madrid enweghị ike iguzogide.
Nna Rodrigo bụ onye na-agụ akwụkwọ n'oge ọ na-enyefe Real Madrid. Nna buru ibu nyeere aka mezue 300,000 nwa ya nwoke.
Rodrigo onye dị afọ 18 gara nke ọma buliri ihe ịma aka nke Madrid n'afọ 2009. Ọ gbara ihe mgbaru ọsọ dị mkpa maka akụkụ Los Blancos ya.
E weere Rodrigo dị ka otu n'ime ụmụ akwụkwọ kachasị mma na agụmakwụkwọ Real Madrid.
Rodrigo Moreno Biography Akụkọ - tozọ E Si Mara Aha Akụkọ:
Mgbe onye isi njikwa Real Madrid Manuel Pellegrini kpọbatara ya na nke mbụ, Rodrigo nwere olile anya na ọ ga-esonye na nke mbụ.
N'ụzọ na-egbu mgbu ihe anaghị arụ ọrụ dịka e siri chee ka a chụrụ Manuel Pellegrini na ọhụụ José Mourinho họpụtara etinyeghị Rodrigo na atụmatụ ya.
Jose Mourinho nwere naanị mmasị na nnukwu egwuregwu (ihe dị ka Ozil, Angel Di Maria, Emmanuel Adebayor) na nke a hapụrụ Rodrigo nkụda mmụọ na-enweghị nhọrọ karịa ịhapụ ụlọ ọgbakọ.
Jose Mourinho rere Rodrigo na Benfica ebe ọ zutere asọmpi ọzọ maka ọnọdụ egwuregwu ya. O nwere asọmpi na-adịghị mma na akụkọ ifo Pablo Aimar, Javier Saviola na Nuno Gomes.
Benfica (utu aha Ndị Eagles) mechara mekọrịta azụmahịa iji zipu Rodrigo na mgbazinye ego na Bolton Wanderers mgbe ọ na-enweghị ike iwepụ akụkọ ifo ndị ahụ.
Na Bolton (emi odude ke Manchester, UK), Rodrigo biri naanị ya, oge a na-enweghị nna ya n'akụkụ ya na nke mbụ ya.
N'ụlọ ọgbakọ ahụ, ọ laghachitere na onye otu onye otu egwuregwu Madrid Marcos Alonso onye gara na-eme nnukwu ihe na Chelsea.
N'ụzọ dị mwute, ọ dịghị ihe ịga nke ọma maka Rodrigo na England n'ụzọ dị ukwuu n'ihi na nwatakịrị ahụ dara ogbenye hụrụ onwe ya n'azụ onye na-agba ọsọ South Korea Lee Chung-Yong maka oghere aka nri ya.
Rodrigo diri oge ihe isi ike n'oge mmalite nke ọrụ agadi ya.
Mgbe ọ gafere ụzọ dị mkpirikpi site na Bolton, Rodrigo lara ezumike nká na Benfica mgbe ọpụpụ nke ndị iro ya (Pablo Aimar, Javier Saviola na Nuno Gomes) onye nwere oge ya.
Rodrigo Moreno Bio - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
Mgbe ọ rụsịrị ọrụ ya na England, Rodrigo laghachiri Portugal ebe ọ meghere isi ọhụụ na ọrụ ya wee malite imere onwe ya aha.
N'oge a, ọ mepụtara n'ụzọ mara mma na Benfica, na-egosipụtakarị àgwà ya ka ọ pụta ìhè.
Ma site n'iji njo ya ma ọ bụ enweghị atụ ya na dribble, Rodrigo maara nke ọma na ọ nwere ihe niile onye na-egwu egwuregwu chọrọ na egwuregwu nke oge a.
Na-egwuri egwu na-amasị nke Nemanja Matic, Nicolas Gaitan, Oscar Cardozo na Axel Witsel, Rodrigo gara n’ihu nyere klọb aka ka ha merie treble ha ama ama (Primeira Liga, Taca de Portugal na Taca da Liga).
Rodrigo Moreno nyeere Benfica aka inweta mmeri 2013-2014 treble- Primeira Liga, Taca de Portugal na Taca da Liga.
Isi ihe mgbaru ọsọ 45 dị egwu ma nyekwa 17 aka na njem 118 ọ na-enye ndị Refeyim ndị Portugal gosipụtara n'ụzọ doro anya ihe mere Valencia ji chọsie ike inweta onye na-awakpo ya.
Rodrigo nwere mmetụta na-ekwe nkwa n'oge mbụ ya na Valencia n'okpuru Nuno Espirito Santo, na-enyere klọb ahụ aka iru ntozu maka asọmpi Champions League.
Ọzọkwa, oge 2018/2019 hụrụ Rodrigo na-enyere klọb ahụ aka inweta mmeri Copa del Rey nke ama ama mgbe ọ gbachara mmeri na egwuregwu mmeri nke 2-1 merie FC Barcelona.
Ihe mgbaru ọsọ Rodrigo nyeere ndị otu Valencia aka ka ha merie FC Barcelona iji merie Copa del Rey nke 2018–19.
N'oge a na-ede akwụkwọ, Rodrigo ka gosipụtara na Valencia nwere ọganihu na nke ikpeazụ nke 16 nke Njikọ Njikọ mgbe ụlọ ọrụ ahụ tụfuru ya maka afọ 5.
Onye na-egwu Spanish nke si na Ọ ga-echetara dike nke na-enweghị obi abụọ ruo mgbe ebighị ebi maka ndị dike ya na egwuregwu. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Rodrigo Moreno nwunye na Nwa:
Site na ịrị elu ya na ama, o doro anya na ndị egwuregwu bọọlụ ga-echerịrị ma nwoke nwoke kpakpando ha nwere enyi nwanyị ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ lụọla nwanyị n'ezie (nwee nwunye).
Agaghị agọnahụ eziokwu ahụ na ọmarịcha mara mma nke Rodrigo tinyere ụdị egwuregwu dị iche iche agaghị etinye ya n'isi ndepụta ọ bụla enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye chọrọ.
N'etiti ndị na-agba ọsọ na-aga nke ọma, e nwere nwanyị mara mma, onye a maara na ọ jidere obi ya. Aha enyi nwanyị Rodrigo ka bụ onye a na-amaghị.
Agbanyeghị, ọ dị nso na onye ọ bụla nọ n'ezinaụlọ ya ọkachasị WAGs nke nwanne nna ya.
Zute enyi nwanyị Rodrigo Moreno.
Rodrigo na enyi ya nwanyị kwupụtara mmekọrịta ha n'ihu ọha na Instagram na 12th nke October, 2018.
Naanị otu afọ mgbe nke ahụ gasịrị (ihe dị ka Ọktoba 2019) ha nabatara nwa mbụ ha. E gosipụtara nwa Rodrigo n'ihu ọha site na Instagram n'ụzọ na-adịghị ahụkebe, nke hụrụ ya ka ọ yi uwe ejiji Halloween ya.
Rodrigo Moreno na Enyi ya nwanyị nabatara nwa mbụ ha na 2019.
Akụkọ Rodrigo Moreno nke Childhoodmụaka - Ndụ Nke Onwe:
Tomata ndu onwe onye nke Rodrigo Moreno na echiche ya site n’egwuregwu bọọlụ ga - enyere gị aka inweta nkọwa zuru ezu banyere ụdị onye ọ bụ.
Na-amalite, ọ bụ onye na-ejide okwu ya n'anya (kporo ya na mgbidi ya na Instagram) nke kwuru;
“Nye ndị nwere okwukwe na ume ọgụgụ isi, ihe na-agaghị ekwe omume bụ nanị okwu nke uche.”
Ighota Rodrigo Moreno Ihe omuma nke Onwe Onye.
Iche echiche Rodrigo bụ nnwale nke nkwụsi ike na ntụkwasị obi ya. Nke a emeela ka ọ nwee ihe ịga nke ọma dị ka mmadụ. Ọ bụ onye na-eji uche ya eme ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na enweghị uche, Rodrigo na-agwụ ike ma ghara inwe mkpali iji mezuo ọrụ ya kwa ụbọchị.
Ọzọkwa, site na Brazil gaa Spain, mgbe ahụ gaa Portugal na n'ikpeazụ, England egosila na Rodrigo nke aka anyị nwere ike imeghari gburugburu na ume dị iche iche gbara ya gburugburu.
Likeness maka Dog: Ndị egwuregwu bọọlụ kpọrọ ha aha: Lionel Messi, Alexis Sanchez wdg hụrụ anụ ụlọ ha n'anya na Rodrigo abụghị otu.
Ọ bụ ezie na e nwere okwu na-enweghị ntụkwasị obi fọdụrụ na egwuregwu nke oge a, ọ ga-ewepụrịrị ụdị Rodrigo maka nkịta ya nke ọ na-ebu mgbe ụfọdụ na uwe Valencia.
Ndị na-agba ọsọ nwere nnukwu nkịta maka nkịta ya.
Akụkọ Rodrigo Moreno nke Childhoodmụaka - Ndụ Ezinụlọ:
More na Nna Rodrigo Moreno: A mụrụ Adalberto Machado na ụbọchị 3 nke June 1964. Ọ bụ onye Brazil lara ezumike nká na-egwuri egwu dịka aka ekpe.
Dị ka nna dị ka nwa nwoke, nna Rodrigo gara ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Flamengo. N'ụzọ dị mwute, ọrụ agadi Adalberto malitere na ihe nhụsianya ka ọ nọrọ afọ mbụ ọfụma ya n'ihi nnọpụ ụkwụ.
Otu klọb onye na-egwuri egwu naanị Flamengo gbara ọgụ nke ukwuu na mmerụ ahụ n'afọ niile ya. Mmepe a dị njọ butere ọrụ ya mgbe ọ dị afọ 24.
Matakwu banyere nna Rodrigo Moreno - Adalberto Machado.
More na nne Rodrigo Moreno: Ozi banyere mama Rodrigo, Andréia Moreno Machado ka ndị mgbasa ozi edebeghị.
Andrea n'oge edere ederede site na mgbasa ozi, na-enwe oge iji rụzuo ọrụ nne ya na Adalberto (di ya), Rodri na Mariana (ụmụ ya).
More na nwanne nwanyị Rodrigo Moreno: Na-ekpe ikpe n'anya ya, o doro anya na nke ahụ Nna Rodrigo, n'adịghị ka nne ya, nwere mkpụrụ ndụ siri ike na ezinụlọ Machado.
Nwanne nwanne Moreno dị ka papa ya. N'okpuru ebe a bụ foto nke ezigbo ndị enyi abụọ (nna na nwa nwanyị) nke e mere na nleta ha na zoo n'afọ 2005.
Nwanne nwanyị Rodrigo Moreno Mariana sere onyinyo ya na papa ya mgbe ọ bụ nwata.
Mariana n'oge edere na-enwe ndụ nzuzo na Instagram. Ọ na-enye ohere ịnweta naanị akaụntụ ya naanị ezigbo ndị enyi na ndị ezinụlọ.
Mgbidi ya IG na-agụ na “Ihe ọma o nwere na ndụ na-atọ ya ụtọ“. Inwe ezigbo oge ya na nwanne ya nwoke nwere ihe ịga nke ọma na-achịkọta ihe 'ndu oma'pụtara Mariana.
Zute Rodrigo Moreno Nwanyị - Mariana.
Rodrigo Moreno Eziokwu - Ndụ:
Aroundga gburugburu € 6.8m (ụgwọ kwa afọ) yana uru ruru € 50.00m (n'oge ederede) na-eme ka Rodrigo bụrụ nde mmadụ nde mmadụ.
N’agbanyeghi na ego bara uru nke ukwuu, Rodrigo agaghị enwe nnukwu nsogbu ijikwa ya. Ọ nwere talent iji nwee nguzozi n'etiti itinye ego / igosipụta akụ na ụba ya na ịchekwa ego. Inwe obere ụgbọ ala na-egosi ịdị umeala n'obi ya.
Mata ụdị ndụ ọ na-ebi.
Rodrigo Moreno Eziokwu Eziokwu:
Tdị Rodrigo Moreno: O nwere a "egbugbu egbugbu”Nke na-egosi dragọn ahụ na-eyiri onwe ya gburugburu logo Valencia n’aka ekpe ya. Ugbu a, gịnị ka egbu egbu a dị n'okpuru ebe a pụtara?…
Attdị Rodrigo Moreno.
Na egbu egbu Rodrigo, dragon ahụ na-anọchite anya ya ka ọ na-eduzi klọb (nke na egosi akara Valencia). Ọ na-awụkwasị ndị otu na-emegide ọgụ, na-ebute ihe mgbaru ọsọ na usoro ahụ.
Religion: Rodrigo si n'obodo (Rio de Janeiro) ebe ihe karịrị ọkara nke ndị bi na (74.5%) na-ekpe okpukpe ndị Kraịst ebe 51.1% bụ ndị Katọlik (akụkọ Wikipedia). Dabere na eziokwu ndị a, o yikarịrị ka Rodrigo na onye ọ bụla nọ n'ụlọ ya na-agbaso okwukwe okpukperechi nke Ndị Kraịst Katọlik.
Ị maara?… Obodo amụrụ Rodrigo bụ ebe obibi Ihe oyiyi Kraist Onye Mgbapụta (nke dị n’okpuru ebe a), a na-akpọkarị Otu n'ime ihe ịtụnanya asaa ọhụụ n'ụwa na ihe isi iyi nke ndị Katọlik Brazil.
Ihe ga-enyere anyị aka ịmata ihe okpukpe ya na-akụzi.
Mmetụta ịhụnanya maka Valencia malitere ogologo oge gara aga: Ejirila Rodrigo na Valencia CF bụrụ nwata. Foto ya tụbara 2004 na-ekwu ya niile.
Foto a na - adịghị ahụkebe nke mmalite ya dị ka onye na-akwado Valencia- Afọ 2004
Nyochaa: Daalụ maka ị gụọ Rodrigo Moreno Akụkọ nwata na gbakwunye Ihe gbasara akụkọ ndụ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Biko mee mmezi na paragraf nke abụọ site na mmalite nke elu. "Nyocha ahụ metụtara ndụ nwata ya, Gbanwee" ya "na" nke ya.
Zaa Hanumantha Siddannawar
Daalụ maka mgbazi ahụ